Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, kanye NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UNkulunkulu ubona lesi sibonelo sokuphatha isintu, sokusindisa abantu, sibaluleke kakhulu kunanoma yini enye. Akakwenzi konke lokhu ngomqondo Wakhe kuphela, noma ngamazwi Akhe kuphela, futhi Yena ikakhulukazi akakwenzi ngokunganaki—ukwenza konke lokhu ngokohlelo, ngenjongo, ngezinga, kanye nentando Yakhe. Kuyacaca ukuthi lo msebenzi wokusindisa isintu ubaluleke kakhulu kuNkulunkulu nakumuntu. Nanoma ngabe unzima kanjani umsebenzi, nanoma ngabe zizinkulu kangakanani iziphazamiso, noma ngabe babuthakathaka kanjani abantu, noma ngabe kujule kangakanani ukuhlubuka kwesintu, akukho kulokhu okunzima kuNkulunkulu. UNkulunkulu uzenza matasatasa, andisa imizamo Yakhe futhi ephatha umsebenzi afuna ukuwenza Yena qobo Lwakhe. Futhi Yena uhlela konke, futhi ebusa abantu bonke kanye nomsebenzi afuna ukuwuqeda—akukho okwalokhu okwake kwenziwa ngaphambili. Kungokokuqala uNkulunkulu asebenzisa lezi zindlela futhi akhokha nenani elikhulu ngalo msebenzi omkhulu wokuphatha nokusindisa isintu. Ngesikhathi uNkulunkulu esenza lo msebenzi, kancane kancane uyaveza kubantu ngaphandle kokugodla umsebenzi Wakhe onzima, lokhu Anakho Nayikho, ukuhlakanipha kanye namandla Akhe, nayo yonke ingxenye yesimo Sakhe. Yena uyakwembula kancane kancane konke lokhu kubantu ngaphandle kokugodla, embula futhi eveza lezi zinto kakhulu kunasekuqaleni. Ngakho-ke, emhlabeni wonke, ngaphandle kwabantu uNkulunkulu aqonde ukubaphatha nokubasindisa, ayikaze ibe khona noma iyiphi indalo esondelene noNkulunkulu, enobudlelwano obusondelene Naye ngalo luhlobo. Enhliziyweni Yakhe, isintu afuna ukusiphatha nokusisindisa sibalulekile kakhulu, futhi siyigugu Kuye ngaphezu kwakho konke; noma ngabe ekhokhe inani elikhulu ngabo, futhi nanoma ngabe bemzwisa ubuhlungu futhi bengalaleli, Yena akabadeli futhi uqhubeka ngokungakhathali emsebenzini Wakhe, engenakukhononda futhi engazisoli. Lokhu kungenxa yokuthi uyazi ukuthi masinyane noma kungekudala, isintu ngelinye ilanga siyovumela ubizo Lwakhe, futhi sinyakaziswe amazwi Akhe, sibone ukuthi Yena uyiNkosi yendalo, bese sibuyela ngasohlangothini Lwakhe…